Apple Car ve tena mizaka tena ary amin'ny dingana fitsapana? | Avy amin'ny mac aho
Apple Car ve tena mizaka tena ary amin'ny dingana fitsapana?
Laura varo | | tsaho
Taorian'ny tsaho sy vaovao maherin'ny herintaona nanamafisana ny fampandrosoana tsara ny Project Titan, ny Apple Car, Apple kosa mangina amin'ny raharaha, ka mitazona hatrany ny haavon'ny saina.
Tsy dia nisy ilana azy intsony ny nangina hatrizay, araka ny nambara Wall Street Journal amin'ny andro farany, Victor Hudson, Tale jeneralin'ny Hudson Pacific Properties, dia nanao fanambarana tsy soa (un) nandritra ny lahateniny nandritra ny fihaonambe momba ny trano.
Izay nolazain'i Victor Coleman momba ny Apple Car
Victor Coleman dia nanambara saika tsy tsapany fa nifandray tamin'ny orinasan'i Tim Cook Hudson Pacific Properties, iray amin'ireo masoivohon'ny trano sy tany misy ifandraisany indrindra, hahitana fananana izay atokana ho an'ny fitsapana fiara mivoatra i Apple, manidy ny fanambarany amin'ny fanazavana mazava: "Tsy mbola niresaka momba ny 74.000 m2 izay tadiavin'i Apple ny fiarany mizaka tena akory aho."
Tamin'ny fotoana nahazoany aingam-panahy feno dia nanampy izany i Coleman Google koa liana amin'ny fahazoana trano manana toetra mitovy amin'ny fanitarana kely kokoa, ary ireo tany ireo no tena angatahin'ireo orinasa fiara hametraka ny departemanta R&D ao aminy lohahevitra fikarohana fiara mahaleo tena. Manamarina ve izany ny fiakaran'ny Apple Car ho fiara mahaleo tena?
Na eo aza ny fitakian'i Coleman sy ny tsaho mitombo, mbola tsy manana fampahalalana ampy izahay hanamafisana fa ny Apple Car dia manana ny teknolojia ilaina mba ho lasa fiara mizaka tena.
Efa fantatray fitarainana avy amin'ny mponina sasany any amin'ny faritra akaiky ny toerana tokony hamolavolana Apple ny Apple Car. feo mafy sy hafahafa avy amin'ny motera amin'ny misasakalina dia efa nahasosotra ny mponina tao amin'ilay faritra, na dia nankafy ilay seho aza ireo mpanaraka ny Tetikasa Titan mahita ny fomba ny fanombohana ny mety ho Apple Car miova endrika.
Ho hitantsika ve ity fiara mifono mistery ity amin'ny volana ho avy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Apple Car ve tena mizaka tena ary amin'ny dingana fitsapana?
Torohevitra tsara indrindra hifehezana ny sary amin'ny iPhone (I)
Mujjo dia manolotra ny tanany Carry-On ho an'ny MacBook 12-inch